Ngwa na -ebuli elu
na -ebuli Jack
Ihe nkedo Jack
Ihe kpatara na agbụ agbụ ga -amị amị
Ị hụtụla ụdị ọnọdụ a: n'oge a na -eji eriri elu, eriri eriri ga -amịcha, n'ezie, otu n'ime ihe ga -eme ka eriri agbụ agbụ bụ diski esemokwu, yabụ kedu ihe kpatara nke ga -ebute esemokwu ahụ. mpekere diski? Na -esote, aga m ewebata gị ihe kpatara ...
Nkọwapụta na akpachapụ anya maka iji ịgba bọọlụ
A na -eji eriri ebili ebuli elu na mmiri, mmanụ, ụgbọ njem na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Nke nwere ịdị arọ na ezigbo mgbanwe. Ngwaahịa a na -amasịkarị ndị ọrụ wee jiri nwayọ dochie slings eriri eriri n'ọtụtụ akụkụ. Iji hụ na ogologo ndụ nke èbè, gịnị bụ ...
Okwu mmalite nke ngwaọrụ nchekwa nke eriri ọkụ eletrik ASAKA HHBB
HHBB chain chain hoist bụ igwe na-ere ọkụ eletrik dị ọnụ ala nke ụlọ ọrụ anyị bidoro. N'okpuru, anyị ga -enye nkọwa zuru ezu na ngwaọrụ nchekwa nke eriri eletriki a: 1. Breeki moto “Brake electromagnetic” bụ ihe nrụpụta breeki pụrụ iche. Njirimara ya bụ na ọbụla ...
Otu esi eme ihe mberede nke ọkụ eletrik
Iji lebara ihe ọghọm akụrụngwa pụrụ iche nke ọma na mberede anya, a na -ahazi atụmatụ ihe mberede ndị a: 1. Mgbe ị na -eji obere ọkụ eletrik 200 n'arọ ma enwere ike daa na mberede, ekwesịrị ịhazi ndị mmadụ ka ha chebe ọnọdụ ahụ, guzobe akara mgbochi na gburugburu. ụlọ ọrụ, yana ...
Ụzọ nyocha a na -ahụkarị maka ndị na -ebuli elu lever
Enwere ụzọ nyocha atọ a na -ejikarị eme ihe maka ibuli elu: nlele anya, nyocha nnwale, na nyocha arụmọrụ braking. N'okpuru, anyị ga -akọwa ụzọ nyocha ndị a n'otu n'otu: 1. Nnyocha nlele 1. A ga -arụpụta akụkụ niile nke eriri elu ratchet lever, ...
Gịnị mere igwe eletrik ji dị oke mkpa?
Ụlọ ọrụ na -ebuli elu nwere njikọ dị ukwuu na igwe eletrik. Ọtụtụ ọrụ ga -eji obere ọkụ eletrik 500kg. Ị nwere ike ịchọ ịma ihe kpatara nrụpụta ngwa eletriki eletriki a nwere ike iji nyere anyị aka nke ukwuu? N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, kedu mmetụta ịdị adị nke ọkụ eletrik a ...
Otu esi eji eriri ekechi ọnụ
Eriri ratchet ibu na -arụ nnukwu ọrụ na njem, mmegharị, mbupu ma ọ bụ ịkwakọba ngwongwo. Mgbe akpọchiri ya, ihe ahụ siri ike ịda wee chebe ihe ahụ ka ọ ghara imebi ya. Isi ọrụ bụ ikesiike. 1. Akụkụ ihe owuwu The ratchet tie down bụ ngwakọta nke s ...
Uru nke ASAKA Ratchet Tie Down
1. Ụdọ ibu ASAKA dị nchebe ma sie ike nwere ike iwepụta opekata mpe puku pound abụọ, na -ebute eriri ịdọ aka na -abịaru nso n'elu ihe na -ejikọ ụdị dị iche iche, na -eme ka ọ sie ike ma dịkwa nchebe. Ọ dabara nke ọma maka idozi ihe adịghị mma. 2. a na -eme belt belt ...
Ihe chọrọ nlebara anya na arụ ọrụ nke eriri eriri eriri eletriki
Ihe chọrọ nlebara anya na arụ ọrụ nke eriri eriri cd1 eriri igwe eletrik bụ dị ka ndị a: 1. A ga -ahazi ụdọ waya dị n'okirikiri nke ọma. Ọ bụrụ na ha agbachiri agbachi ma ọ bụ gbuo onwe ha, ekwesịrị ịkwụsị ha ma megharịa ha. A machibidoro iwu ịdọrọ na ịzọ ụkwụ ...
Nlekọta anya maka ịhọrọ Jack Bottle
Mgbe anyị họọrọ jaakịịịịịkịịịịịịịịịkịkịkị, enwere ọtụtụ ihe ekwesịrị iburu n'uche, dịka ọmụmaatụ: 1, Anyị kwesịrị ikwenye ikike nke anyị chọrọ, anyị tụrụ aro ka ịhọrọ nke nke ibuli ibu ga -adị elu karịa ibu ahụ. na nkeji 20%. 2.Body elu na ọrịa strok: Dị ka t ...
Otu esi echekwa slings
E nwere ọtụtụ ụdị slings. Dị ka èbè ndị nkịtị, dị ka eriri waya, ụdọ na nko, anyị kwesịrị ijikwa ya nke ọma ka anyị wee gbochie ya ka ọ ghara ifufu ma ọ bụ jiri ya mee ihe n'ụzọ na -ezighị ezi. Ihe egwu. Lezienụ anya na isi ihe ndị a mgbe ị na -echekwa: 1. A ga -etinye èbè na -enweghị njedebe na ...
Ndụ nke ratchet tie na -adabere n'ịdị mma ya
ratchet tie ala ejiri dị ka eriri ratchet na -ewu waya ahụ. Mgbe a na -eji ya, buru ụzọ tufuo eriri igwe nchara ma ọ bụ waya galvanized na eriri eriri, dozie ya na ogwe aka obe, jiri mpekere were eriri igwe, wee si na ya wepụta oghere pụrụ iche. Ndụ nke ratchet t ...
Nkọwa na ịkpachara anya maka anyị ...
Okwu mmalite ngwaọrụ nchekwa nke ASAK ...
Otu esi eme ihe mberede ọkụ eletrik ...
Owuwu oge, okporo ụzọ LIANGZHU, mpaghara YUHANG, HANGZHOU, mpaghara ZHEJIANG, CHINA